လူတစ်ယောက်ကို တမ်းတမ်းတတ သိပ်ချစ်နေပြီဆိုရင် - Tameelay
အမျိုးသားတွေ သူတို့မိန်းကလေးကို တကယ်ချစ်မှသာ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူတွေ
မိန်းကလေးအများစုဟာ သူတို့ချစ်သူက သူတို့ကို သိပ်မချစ်ဘူး ၊ ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ အချစ်တွေလျော့ကုန်ပြီ ပြောင်းလဲသွားပြီ စသဖြင့် ထင်လေ့ရှိကြတယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ မှားမှာပေါ့ ကောင်မလေးရယ်… တို့ယောက်ျားတွေက မိန်းကလေးတွေလို နုနုရွရွ အသေးစိတ် စိတ်ခံစားချက်တွေကို မဖော်ပြတတ်ပေမယ့် သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ် ။ …
လက်ရှိချစ်သူလေးနဲ့ အတိတ်ဘဝက ရေစက်ပါ ၊ မပါ ဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက် ရေစက်သာပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံရသလုိုပဲ ရေစက်မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ်ဆုိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြမှာပါ။ လူတုိုင်းကရေစက်ပါလုို့တွေ့ဆုံကြသလုိုပဲ ကုိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆုိုတာ လည်း အတိတ်ဘ၀ကဆုံဖူး ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ဆုတောင်းတွေကြောင့် အခုဘ၀မှာလက်တွဲ ဖော်အနေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တယ်လုို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒီလုိုပဲ …
ယောက္ခမဖြစ်တဲ့နင့်မိဘအိမ်ရော ငါ့မိဘအိမ်မှာရော ငါမနေနိုင်ဘူး. ကိစ္စတခုခုဖြစ်လာတိုင်းဘယ်သူ့မျက်နှာကြည့်နေရလို့ဆိုတဲ့အရှိန်အဝါအောက်မှာ… နင်ရောငါရောမွန်းကျပ်မှာစိုးလို့ပါ. ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့မနေနိုင်သေးရင်တောင် အိမ်လေးငှါးပီးသီးသန့်နေကြမယ်လေ… မနက်စောစောနင်စားဖို့အတွက်… မနက်စာငါပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ… နင်ကတံမြက်စည်းလေးလှည်းပေးပေါ့… နင်ရောငါရောအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်… ဘယ်သူပဲအရင်ဆုံးပြန်လာလာ နောက်ကျမှရောက်တဲ့သူကို… ရေအေးလေးတခွက်နဲ့ကြိုပီး နဖူးလေးပေါ်နမ်းလို့အမောဖြေကြမယ်လေ… ညစာကိုငါချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပီးတဲ့အချိန်မှာ… နင်ကထမင်းဝိုင်းကိုကူပြင်ပေးပီး… ငါကစားသောက်ပီးပန်းကန်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာ… နင်ကထမင်းဝိုင်းလေးသိမ်းပေးပေါ့ နင်ရောငါရောအလုပ်ပိတ်တဲ့နေ့တွေမှာ… ငါအဝတ်လျှော်မယ်လေ … နင်ကဝိုင်းလှန်းပေးပေါ့… အလုပ်ကိစ္စနဲ့နင်အပြင်သွားလို့… အချိန်ကြာတဲ့အခါ …